आइरनटेक गुडिया आपूर्तिकर्ता आधिकारिक जीवन आकार प्रेम गुड़िया अनलाइन किन्नुहोस्
ट्रिनिटी 160CM एच-कप आइरनटेक सिलिकॉन हेड सिम्पल पन्जेन्ट सिलिकॉन सेक्स डल
Norton 176CM जेन्टलम्यान आइरनटेक आकर्षक मुस्कान सिलिकन सेक्स डल
Owen 176CM Abs Irontech छोटो गोरा कपाल सिलिकन सेक्स डल
ज्याक सुन्दर आँखा सिलिकन आइरनटेक पुतली 176cm कांस्य छाला M4 केटा लाइफलाइक सेक्स डल
Annabelle 166 CM C-Cup Irontech Love Doll गोल्डेन लामो कपाल युरोपेली र अमेरिकी शैली सभ्य विटी सिलिकॉन सेक्स डल
मीसा डीप क्लीभेज सिलिकन आइरनटेक पुतली 166 सेमी सी-कप सेन्सुअल फ्याट बट फुल फर्मिङ युरोपेली लोकप्रिय रङ सेक्सी स्तन लाइफलाइक सेक्स डल
सेज 166CM सी-कप आइरनटेक लामो कपाल एशियन स्टाइल जेन्टल कन्सिडरेट सिलिकन सेक्स डल
ड्यानिएला 158CM ई-कप आइरनटेक सिलिकॉन हेड सद्गुण शरारती सिलिकॉन सेक्स डल
प्रीमियम गुणवत्ता आयरनटेक गुड़िया सेक्स डल अफोर्डेबल
2022 - हामी Irontech पुतली को उपयोग र विवरण को बारे मा अधिक पेशेवर छ
राम्रो र लामो समय प्रयोगको लागि, कृपया प्रयोग गर्नु अघि म्यानुअल सावधानीपूर्वक पढ्नुहोस्। यौन पुतली परिचय: आइरनटेक पुतली TPE (साइबर-स्किन पनि भनिन्छ) र लचिलो धातु कंकालबाट बनेको हुन्छ। सामग्री वातावरण मैत्री र स्वस्थ छ, र व्यापक रूपमा उच्च-अन्त वयस्क उत्पादनहरूमा प्रयोग गरिन्छ। १०० सेन्टीमिटरभन्दा अग्लो पुतलीको पूर्ण कार्यात्मक मुख, गुदा र योनि हुन्छ। गुदा र योनि वास्तविक महिला बिल्ली गुदा मार्फत बनाइन्छ। र प्वालहरूको आन्तरिक संरचना मानव शरीरको शारीरिक संरचनासँग मिल्दोजुल्दो छ। जब तपाइँ पुतलीसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको गोप्य भाग चूसिएको महसुस गर्नुहुनेछ जब यो पर्याप्त गहिरो प्रवेश गर्दछ। पुतलीले धेरै जसो कार्यहरू गर्न सक्छ जुन मानिसले गर्न सक्छ र केही आसनहरू पनि गर्न सक्छ जुन मानिसको लागि सम्भव छैन।
2022 मा Irontech Doll को बारेमा तपाईसँग प्रायः सोधिने प्रश्न र उत्तरहरू
1. आँखा सार्न सकिन्छ?
नेत्रगोलहरू समायोजन गर्न सकिन्छ। आफ्नो औंलाले आँखालाई अलिकति तल थिच्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले चाहानु भएको दिशामा आँखा समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ। पुतलीको बरौनीमा चोट नपुगेको सावधान रहनुहोस्।
2. दबाब चिन्हहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने?
हामी एन्टी-प्रेसर छाला सामग्री प्रयोग गर्छौं, पुतलीको छाला दबाब चिन्हहरू उत्पादन गर्न गाह्रो छ। यदि यो हुन्छ भने, कृपया केही समयको लागि दबाब छोड्नुहोस्, यो आफैंमा रिकभर हुनेछ। यदि यो केहि समयको लागि पुन: प्राप्ति भएन भने, कृपया केहि बेरको लागि न्यानो भिजेको तौलिया प्रयोग गर्नुहोस् र यसलाई बारम्बार गर्नुहोस्, यसले दबाब चिन्हहरू हटाउन मद्दत गर्नेछ।
3. क्षतिग्रस्त छाला कसरी मर्मत गर्ने?
यदि तपाईंले पुतलीको छालालाई हानि गर्नुभयो भने, कृपया मर्मत गर्नको लागि हाम्रो विशेष मर्मत गोंद प्रयोग गर्नुहोस्। एयरलाइन ढुवानी प्रतिबन्धका कारण, हामी यसलाई पुतलीसँग पठाउन सक्षम छैनौं। यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने कृपया हामीबाट व्यक्तिगत रूपमा गोंद किन्नुहोस्। यदि ठूलो क्षेत्र क्षति उत्पादन गरिएको छ भने, मद्दतको लागि ग्राहक सेवालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
4. के म फर्केर विनिमय गर्न सक्छु?
उत्पादन व्यक्तिगत सामान भएकोले, हामी सामान फिर्ता स्वीकार गर्दैनौं। सबै उत्पादनहरू कडा परीक्षण पछि मात्र बाहिर पठाइन्छ। यदि गुणस्तर समस्याहरू भेटिएमा, कृपया सामान प्राप्त गरेपछि तीन दिन भित्र ग्राहक सेवालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
2022-2023 थप सस्तो सेक्स पुतलीहरू तपाईलाई पत्ता लगाउनको लागि पर्खिरहेका छन्
यदि तपाइँ थप सस्तो सेक्स डलहरू फेला पार्न चाहनुहुन्छ भने, क्लिक गर्नुहोस् UR डॉलहरू, तपाईंले अप्रत्याशित आश्चर्यहरू पाउनुहुनेछ, यदि तपाईं किन्न चाहनुहुन्छ भने सेक्स गुडिया कम्तिमा पैसाको लागि, केवल क्लिक गर्नुहोस् यौन पुतल धड आफ्नो सपना प्रेमी खोज्न।
सामाग्री: टीपीई सेक्स डल्स शैली: बीबीडब्ल्यू यौन गुड़िया, जापानी सेक्स गुड़िया, यूरोपीयन शैली गुडिया, परिपक्व यौन गुड़िया, र यस्तै।
परिचय ： आइरनटेक डलसँग वास्तविक महिलाहरूको लागि सबै थोक हुन्छ: नरम, बनावट, लोचयुक्त छाला, र धातुको कंकालमा पूर्ण रूपमा टिकाएको शरीर। यो दर्शन, हात, र स्पर्श को मामला मा पूर्णताको नजिक छ। आइरनटेक डॉलको पुत्रा उच्च-गुणवत्ता प्रेम गुड़ाहरू हुन् जुन व्यक्तिगत रूपमा निर्मित हुन्छ र TPE सँग मोल्ड हुन्छ। आश्चर्यजनक सुविधाहरू र अनुपम सौन्दर्यको साथ। ब्रान्डले व्यक्तिको सौन्दर्यको खोजीलाई सन्तुष्ट पार्नु हो।
+ सबै पुतलीहरू पूर्ण अनुकूलन योग्य छन्
+ आकर्षक र अद्वितीय अनुहार
+ नाजुक र यथार्थिक योनी
+ यथार्थवादी शरीर र उच्च-गुणवत्ताका सामग्रीहरू
+ पश्चिमी सुविधाहरूको साथ सुन्दर युवा वयस्क केटी
+ महिला मोडेलहरू वा फेशन म्यागजिन मोडेलहरूको साथ सौंदर्य
+ एक राम्रो-अनुपातित अनुहार र वर्णहरूको सामन्य आकार हुन्छ
- यसको अद्वितीय शैली सबैलाई अपील नगर्न सक्छ
- नयाँ शैलीका पुतलीहरू बिस्तारै अद्यावधिक हुन्छन्
१141१ सेमी आयरनटेक गुडाहरू
१145१ सेमी आयरनटेक गुडाहरू
१150१ सेमी आयरनटेक गुडाहरू
१153१ सेमी आयरनटेक गुडाहरू
१155१ सेमी आयरनटेक गुडाहरू
१156१ सेमी आयरनटेक गुडाहरू
१157१ सेमी आयरनटेक गुडाहरू
१158१ सेमी आयरनटेक गुडाहरू
१159१ सेमी आयरनटेक गुडाहरू
१161१ सेमी आयरनटेक गुडाहरू
१163१ सेमी आयरनटेक गुडाहरू
१165१ सेमी आयरनटेक गुडाहरू
१168१ सेमी आयरनटेक गुडाहरू
१170१ सेमी आयरनटेक गुडाहरू